Hazakazaka Ho An’ireo Mpiasan’i Samsung Teo Aloha Marary Ao Korea Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Novambra 2013 8:49 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, বাংলা, Français, 日本語, 繁體中文, 简体中文, Italiano, Português, English
Miatrika fitoriana marobe any amin'ny firenena maro ny vondron'orinasa-goavana Samsung noho ny fanitsakitsahan'izy ireo mibaribary ny lalàna mifehy ny asa. Saingy ao Korea Atsimo, firenena niavian'izany teknolojia goavana izany, ny fihavanan'ireo fianakaviana akaiky sy orinasa no mampatanjaka azy, miatrika ady mafy amin'ny Samsung ireo mpiasa teo aloha izay marary mafy vokatry ny asa.
Saingy soa ihany, nisy ny fivoarana tsara tamin'ity volana ity.
Sary amin'ny afisin'ny “Fianakaviana Hafa”, horonantsarimihetsika ifandrimbonana mampiseho ny marina momba ny aretin'ny homamiadan'ny rà nahazo ireo mpiasa niharam-boina tao amin'ny orinasa Samsung. Fair Use Image
Tamin'ny 18 oktobra, nanome rariny ho an'ilay mpiasan'ny Samsung namoy ny ainy noho ny aretina homamiadan'ny rà goavana ny fitsarana tao Seoul, ary nanamafy fa vokatry ny tontolon'ny asa izay ratsy dia ratsy sy mampidi-doza ao amin'ny orinasa no nahatonga ny aretina.
Tamin'ny fiandohan'ny volana oktobra, nisongadina tamin'ny lohatenin-gazety iraisam-pirenena ilay horonantsarimihetsika ifandrimbonana mitondra ny lohateny hoe “Fianakaviana hafa” (eto ny sombin'ny horonantsary), izay mamariparitra ireo mpiasa tratran'ny homamiadan'ny rà sy aretina hafa tsy fahita firy tamin'izy ireo niasa tao amin'ireo orinasa Samsung.
Nandritra ny famotorana tao amin'ny Antenimeram-pirenena tamin'ny 22 oktobra, nisy ireo fanambarana hafa momba ny tsy fiovam-pihetsiky ny Samsung amin'ireo lasibatra, ary maro ireo mpanao lalàna nanameloka [ko] ny Samsung ho nanery ireo mpiasa tsy mahafantatra akory ny vokatra simika ampiasainy “mba hitady porofo izay nahatonga ny aretina homamiadan'ny rà”. Toa niaro tena i Samsung nandritra ny fotoam-pitsarana – raha tokony handà fotsiny ny filazana fa noho ny tontolon'ny asa no nahatonga ny aretina homamiadan-drà, ny fanafoanana ireo fitoriana napetraky ny niharam-boina izay nolazainy fa tsy misy porofo indray no nifantohan'izy ireo.
Nahatezitra ireo mpiserasera ihany koa izany:
Olona maherin'ny 80 no marary sy namoy ny ainy noho ny aretina tsy sitra-panafody, saingy tsy mampihontsona ny Samsung izany. Mba loza, ireo niharam-boina ve no tokony hitady porofo marina nahatonga azy ireo tratran'ny homamiandan'ny rà? Tokony anjaran'ny Samsung no manome porofo fa tsy avy amin'ny tontolon'ny asa ny homamiadan'ny rà. Tsy olona iray ihany akory no tratran'ny aretina fa marobe. Orinasa mahazo tombony aminà arivo miliara ity resahina ity ary miantso azy ho ‘Fianakaviana hafa’ [teny filamatra ao amin'ny dokambarotra].
Nilaza ny fitsarana fa ny homamiadan-drà ao amin'ny orinasa mpampita aratra amin'ny ampahany (semi-conducteur) dia “loza indostrialy” [manamafy fa tompon'andraikitra amin'ny loza ny Samsung]. Mety hisy fiantraikany amin'ireo fotoam-pitsarana hafa ve izany? Raha-te ho lasa orinasam-“pirenena” tena izy ao Korea ny Samsung, dia tokony hiaiky ireo loza indostrialy ary tokony hiasa hanatsara ny tontolon'ny asa.
Tamin'ity herinandro ity, namaky ilay boky “Fianakaviana Hafa Nahiliky ny Samsung” aho, tsy nahatana ny ranomasoko aho. Rehefa liana ireo namako, dia nampindramiko azy ireo ilay boky ary nanontany ahy izy ireo raha marina avokoa ny rehetra… Vondron'orinasa lehibe ny Samsung, saingy tsy maintsy mbola mitady ny marina isika. Rehefa avy nandre aho ny nanamafisan'ny didim-pitsarana fa loza indostrialy izany, dia nahatsiaro maivamaivana.
Mandeha ny fotoana ho an'ireo niharam-boina – fitoriana sivy ankehitriny no mbola miandry ary amin'ireo niharam-boina 15 nampiakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana, enina no efa namoy ny ainy. Nahatratra 200 mahery (efa maty ny 80) no isan'ireo mpiasa teo aloha tao amin'ny Samsung tratran'ny aretina homamiadan'ny rà sy aretina hafa goavana, ary rehefa voaporofo ny aretin'izy ireo fa avy amin'ny fepetra momba ny asa, tsy maintsy hiaritra ny fitavozavozan'ny fanjakam-birao sy ireo raharaha ara-pitsarana hafa tsy dia zava-dehibe izy ireo.